कोरोनाविरूद्ध खोप लगाउनका लागि ‘सिरिन्ज’को अभाव किन भयो? – Health Post Nepal
कोरोनाविरूद्ध खोप लगाउनका लागि ‘सिरिन्ज’को अभाव किन भयो?
२०७८ पुष १३ गते १७:२८
काठमाडाैं – गत पुस ४ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले आफू पढेको विद्यालयको खोपकेन्द्रबाट विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाविरूद्ध खोप दिने अभियानको सुरूवात गरे। हेटौडाको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खोप दिएर देशभरि खोपको ‘स्कुल’ अभियान सुरू गरेका स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए- ‘चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई पूर्णमात्रामा खोप दिइनेछ।’
उनको भनाइको अर्थ थियो- त्यो बेलासम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकले पूरै डोज खोप लगाइसकेका हुनेछन्। त्यही अभियानमा थपिएका देशभरका १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका अधिकांश विद्यार्थीहरूले पनि खोप दिन सरकारले सुरू गरिसकेको छ।
तर, त्यसको एकसाता नबित्दै सिरिन्ज९सुई०को अभाव भएपछि मन्त्रालयले त्यो विद्यालयमा खोप अभियान बन्द गरेको छ।
सुरूमा सरकारले पुस ४ गतेदेखि सातवटै प्रदेशका ५७ जिल्लामा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिडविरुद्धको मोर्डना खोप दिन सुरु गरेको थियो।
तर बागमतीसहित तीन प्रदेशका आठ जिल्लामा भने यही पुस १३ देखि २२ गतेसम्म फाइजर खोप अभियान चलाउने तयारी भएको थियो।
ती आठ जिल्लामा वागमती प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली र चितवन गरी छ जिल्ला तथा सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत रहेका थिए।
तर, मंगलबार ९१३गते० बिहानै मन्त्रालयले सूचना निकालेर भन्यो( यी आठ जिल्लामा खोप अभियान स्थगित गरिएको छ। त्यसको कारणबारे मन्त्रालयले भनेको छ- ‘८ जिल्लामा पुस १३ गतेदेखि बालबालिकाका लागि दिने भनिएको कोभिड(१९ विरूद्धको ‘फाइजर खोप’ खोपसँगसँगै आउनुपर्ने सिरिन्ज प्राप्त नभएकाले हाललाई स्थगित गरिएको छ।’
त्यो सिरिन्ज कहिले आइपुग्छ भन्नेबारेमा मन्त्रालयले केही भनेको छैन। बरू त्यसमा भनेको छ- सिरिन्ज प्राप्त हुने वित्तिकै खोप लगाउने कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने जानकारी गराइन्छ।
मन्त्रालयले पुस १३ देखि २२ गतेसम्म पहिलो मात्रा र आगामी माघ ४ देखि १३ गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप लगाउने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
विद्यालयलाई खोप केन्द्र बनाउने सन्दर्भमा भने जिल्लास्तरीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकार प्रमुख रहेको समितिले निर्धारण गरेको छ। धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयमा सोही विद्यालयमा र कम विद्यार्थी भए दुई-तीन विद्यालय मिलाएर कुनै एउटा विद्यालयमा खोप लगाइने तय गरिएको हो।
जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहले विद्यालयमा अभियान सुरु भएको हो। पहाडी र दुर्गग जिल्लामा सय विद्यार्थी भएपछि खोप केन्द्र मानिएको छ भने तराई र शहरी ठाउँमा २०० विद्यार्थीलाई एक खोप केन्द्र मानिएको छ।
खासमा के भएको हो ?
अहिले सरकारसँग फाइजर खोप लगाउनका लागि चाहिने सुई छैन। त्यसका लागि ०.३ एमएलको सिरिन्ज आवश्यक पर्छ।
तर त्यो पर्याप्त मात्रामा नभएको भन्दै मन्त्रालयले खोप अभियान सुरू हुने दिन बिहानै सूचना निकालेर खोप लगाउने कार्यक्रम स्थगित भएको जनाउ दियो। तर, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै विद्यालयहरू आफ्ना विद्यार्थीलाई खोप लगाउने तयारी बिहानैदेखि गरिरहेका थिए।
सिरिन्जमात्रै होइन, त्यो खोपसँग मिसाउनुपर्ने रसायन ‘डाइलुएन्ट’ पनि अहिले सरकारसँग छैन। खोप निर्देशिकाका अनुसार एक सिसी भ्याक्सिन(खोप)मा त्यो ‘डाइलुएन्ट’ मिसाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा करिब ०.९ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड हुन्छ। जसले खोपमा भएको बाक्लोपनालाई केही कम गर्ने र अरू रसायनहरुको पनि सन्तुलन मिलाउने कामसमेत गर्छ। जसबाट खोपको प्रभावकारिता बढ्न जान्छ।
यसअघि कोभ्याक्सले खोपसँगै सिरिन्ज र ‘डाइलुएन्ट’ पनि पठाएको थियो। तर गत पुस ९ गते त्यही कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत आएको थप ६ लाख ६४ हजार ५ सय ६० डोज फाइजर खोपसँग भने ती सामग्रीहरू पठाएन।
तर मोडर्ना खोप दिने भनिएका ५७ जिल्लामा भने यो अभियान सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारसँग अरू खोपका लागि प्रयोग हुने ०।५ एमएलको सिरिन्जमात्रै छ।
मन्त्रालयका खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालका अनुसार ‘डाइलुएन्ट’ भने बुधबार आइपुग्नसक्छ। तर सिरिन्ज आउने भने टुङ्गो छैन।
‘त्यो हामीले किन्ने होइन। किन्न पनि मिल्दैन’ उनले भने ‘भएको त्यत्ति हो। अब सिरिन्ज र ‘डाइलुएन्ट’ आइपुग्नासाथ हामीले खोप अभियान सुरू गर्छौं।’
दाहालका अनुसार यो प्रकारको सिरिन्ज र ‘डाइलुएन्ट’ बाहिर किन्न पाइँदैन। त्यही खोपको विशेषताअनुसार बनेका कारण कोभ्याक्सले नै सिरिन्ज र ‘डाइलुएन्ट’ दिनुपर्ने हुन्छ।
‘यसअघि सँगसँगै आउँथ्यो अहिले सिफ्ट सिफ्टमा पठाउने भएछ’ उनले भने ‘यसपालि चाहिँ तीन खेप नै हुने भएछ। त्यसैले ढिला भएको हो। यसपालि त्यस्तै भयो।’
उनका अनुसार यसमा आत्तिनुपर्ने त होइन तर, निर्धारित समयभन्दा केही ढिला भएको मात्रै हो।
दीर्घ रोगी तथा वृद्धवृद्धाहरूलाई दिने भनिएको फाइजर खोप यसअघि नै उनीहरूले लगाइसकेका कारण १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब ५० हजार किशोरकिशोरीले यो खोप लगाइसकेका छन्।
खोप तालिका नबनेका बाँकी १२ जिल्लामा पनि यही फाइजर खोप नै लगाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। संगीता मिश्राले पनि कोभ्याक्सले सिरिन्ज र खोपमा मिसाउने तरल पदार्थ आउनासाथ खोप अभियान सुरू हुने बताइन्।
कति छ खोप ?
नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रहरूको अनुदान र किनेकोसमेत गरी अहिलेसम्म ३ करोड ९२ लाख ३ हजार ९ सय डोज प्राप्त गरिसकेको छ।
त्योमध्ये अहिलेसम्म २ करोड ४० लाख २३ हजार ५६१ मात्रा खोप प्रयोग भइसकेको छ। जसमध्ये लक्षित जनसंख्या(१८ वर्षदेखि माथ)को करिब ५१.३ प्रतिशतले पूरै मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। भने करिब ६९.२ प्रतिशतले एकमात्रा खोप लगाएका छन्। १८ वर्षदेखि माथिल्लो उमेर समूहका करिब १ करोड ९९ लाख २२ हजार १६४ नागरिकलाई पूर्णमात्रा खोप दिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ।
अब सरकारसँग १ करोड २२ लाखभन्दा धेरै डोज खोप मौज्जाद छ। योसँगै सरकारसँग भएका सबै भन्डारणहरू भरिएका छन् र अब आउने खोपका लागि भन्डारण गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकै लागि आगामी १५ दिनसम्म सरकारले प्रत्यक दिन ५ लाख मानिसलाई खोप दिने अभियान सुरू गरेको छ।
खोप अभियानलाई व्यापक बनाउनका लागि सरकारले अब अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुमा पनि खोप दिने व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीका अनुसार सबै मेडिकल कलेज र ५० शय्या क्षमताभन्दा बढी भएका निजी अस्पताललाई कोरोनाको खोप केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिइने छ।
मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालले चाहेको खण्डमा सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी १८ वर्षमाथिका नेपाली नागरिकलाई सरकारको नियमानुसार कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको भनाइ छ। खोप उपलब्धताका आधारमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खोप लगाउन आह्वान गरिएको सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले जानकारी दिए।